बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा कांग्रेसलाई ओलीको कटाक्ष – देखाउनेले दाग देखायो किन रूवावासी ? – NepalDailyPost
नेपाल डेली पोस्ट २०७६, ३ फाल्गुन शनिबार १३:१९
बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा कांग्रेसलाई ओलीको कटाक्ष – देखाउनेले दाग देखायो किन रूवावासी ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रमुख प्रतिपक्ष दलप्रति कटाक्ष गर्दै अधिनायकवाद आउन लागेको खुवै प्रचार गरेको आरोप लगाउनु भएको छ । सरकारको नेतृत्व सम्हालेको दुई वर्ष पुगेको अवसरमा आज प्रतिनिधिसभामा सम्वोधन गर्नुहुँदा उहाँले कांग्रेसलाई कटाक्ष गर्नुभएकाे हाे ।
‘आम निर्वाचनताका एउटा कुरा चलेको थियो, कम्युनिस्टको सरकार बन्यो भने रुन पनि पाइँदैन । यसलाई खुब दोहोर्‍याएको पाइयो। तर, वास्तविकता त्यस्तो थिएन। उहाँले भन्नुभयाे, ‘अधिनायकवाद आउन लागेको भन्ने जस्ता कुराको एकतारे पनि खुबै बज्यो। कहिले कहाँ, कहिले कहाँ, कहिले माइतीघर मण्डलामा, कहिले गुठी विधेयकको अवतारमा त्यो प्रकट भयो।’
ललिता निवास र प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास दुबै बालुवाटारमै भएकाले प्रधानमन्त्रीले नै जग्गा बेचेर खाएछ भने जस्तो भान पर्नेगरी ‘बालुवाटार काण्ड’लाई प्रचार आक्रमणको बनाएकाे उहाँकाे आरोप थियो । उहाँले भन्नुभयाे, ‘लुटिएको सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन पहल गर्ने म स्वयंलाई नै काण्डको ‘नाइके’ झैं प्रस्तुत गरिएको पनि पाइयो ।’
बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा केहीको भूमिका एउटा चिनियाँ लोककथासँग मिल्दो देखिएकाे पनि बताउनुहुँदै एउटा कथा सुनाउनुभयाे- ‘एकजना युवा ‘ड्रागन’ खुब मन पराउँथ्यो । उसले आफ्ना सबै सरसामन, लुगाफाटा र यहाँसम्म कि बिछ्यौनाको तन्ना र तकियामा पनि ड्रागनकै चित्र कुँद्यो । आफ्ना भक्तको प्रेमबाट प्रभावित भएर एकरात ड्रागन उसलाई दर्शन दिन आएछ । साक्षात् ड्रागन, चित्रको ड्रागनभन्दा अजङ्गको, डरलाग्दो थियो । भक्तको सातो उड्यो र उसको भागाभाग भयो ।’
ललिता निवास प्रकरण आरोपितहरुविरुद्ध मुद्दा दायर गरेपछि केहिकाे ती ड्रागनप्रेमी युवाकाे जस्तै साताे गएकाे बताउनुभयाे ।
‘सरकारले ललिता निवास प्रकरणमा समितले जे प्रतिवेदन दियो, त्यसलाई आवश्यक कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठायो । आयोगले छानविन गरुञ्जेल केही मानिसले अधीरतापूर्वक सरकारलाई उत्तेजित पार्नेगरी खोई त कारबाही भन्दै प्रश्न गरिरहे । यो श्रृङ्खला आरोपितहरुविरुद्ध मुद्दा दायर हुने दिनसम्मै चलिरह्यो । छानविनको समयमा होस् वा त्यसपछि सरकार शान्त रह्यो । र, सरोकारवाला निकायद्वारा विधिपूर्वक गरिने काममा सहयोगी बन्यो,’ उहाँले भन्नुयभाे, ‘आरोपितहरुविरुद्ध जब मुद्दा दायर भयो, ‘ड्रागनप्रेमी युवाको जस्तै रह्यो ।’
यसै सन्दर्भमा उहाँले एउटा गीत सम्झनुभयाे- “देखाउनेले दाग देखायो किन रुवावासी” ।
उहाँले भद्रगोल र प्रणालीबिहीन अवस्थामा लड्खडाई रहेको मुलुकलाई ट्रयाकमा ल्याउन हामी सबै संयम र सहयोगी आग्रह पनि गर्नुभयाे । आरोपीहरु न्यायालयले फैसला नगरेसम्म अपराधी नहुनेसमेत उहाँले बताउनुभयाे ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास जग्गा अनियमितता गरेकाे आराेपमा कांग्रेस उपसभापति विजयकुमार गच्छदारसहित १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेकाे थियाे ।
त्यसपछि कांग्रेसले आफ्ना नेतालाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाएकोमा आपत्ति जनाएको थियाे । कांग्रेसले वदनियतपूर्वक गच्छदारलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाएके भन्दै संसद अवरूद्ध गर्नकाे साथै सडकमा प्रर्दशन समेत गरेकाे थियाे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार कसैप्रति पनि आग्रही वा पूर्वाग्रही नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । ‘म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, सरकार कसैप्रति पनि आग्रही वा पूर्वाग्रही छैन, हुँदैन,’ उहाँले भन्नुभयाे ।
उहाँले सुन तस्करी, वाइडबडी लगायत विभिन्न प्रकरणको निष्पक्ष छानविन हुने पनि बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयाे, ‘आग्रह, पूर्वाग्रह वेगर चर्चामा ल्याइएका वा चर्चामा रहेका सुन तस्करी, वाइडबडी लगायत विभिन्न प्रकरणको निष्पक्ष छानविन हुन्छ ।’
PREVIOUS Previous post: काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर पछिल्ला केही दिनयता तापक्रम बढ्यो
NEXT Next post: प्रधानमन्त्रीलाई सांसदको प्रश्न – सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्री स्तरीय वार्ता कहिले हुन्छ ?